दशैं पर्वमा लगानीकर्ताहरुमा खुशीको बहार, लगातार चौथो दिन पनि बढ्यो शेयर बजार| Corporate Nepal
कात्तिक ६, २०७७ बिहिबार १५:४८
काठमाडौँ । दशैं पर्वमा शेयर बजारले लगानीकर्ताहरुमा खुशीको बहार ल्याएको छ । बजार लगातार आज चौथो दिन पनि बढेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से) का अनुसार आज शेयर बजार ८.५४ अंकले बढेको हो । ०.५३ प्रतिशतले बजार बढ्दा नेप्से परिसूचक पुनः १६ सय माथि उक्लिएको छ । साताको अन्तिम दिन र दशैं बिदा हुनु अघिल्लो दिन आज नेप्से परिसूचक १६०६.२५ अंकमा गएर अडिएको छ ।
आज १८७ कम्पनीका ६४ लाख ५७ हजार ८ सय ३३ कित्ता शेयर किनबेच हुँदा १ अर्ब ९९ करोड ४५ लाख ४३ हजार ९ सय १९ रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ ।
जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताहरुले सबैभन्दा बढी ९.८९ प्रतिशतले नाफा कमाएका छन् भने माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेका लगानीकर्ताहरुले सबैभन्दा बढी ३.६१ अंकले घाटा व्यहोरेका छन् । आजैमात्र १४ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको कुमारी बैंकको उच्च कारोबार भएको छ । कुमारीको १४ करोड १५ लाख ४५ हजार २ सय ३७ रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको नेप्सेले जनाएको छ ।
बजार बढेको दिन आज होटल समूह, जलविद्युत समूह, जीवन बीमा समूह र म्युचुअल फण्ड घटे पनि अरु सबै समूहमा हरियाली छाएको छ । निर्जीवन बीमा समूहमा आज लगानीकर्ताहरु झुम्मिएका छन् । निर्जीवन बीमा समूह ३८.५२ अंकले बढेको हो ।
दशै पर्व शुरु भएपछि शेयर बजारमा उत्साह छाएको छ । साताको दोश्रो दिन सोमबार १५.५८, तेश्रो दिन मंगलबार १३.२२ र चौथो दिन १३.९४ अंकले बढेको बजार आज अन्तिम दिन पनि ८.५४ अंकले बढेको हो । साताको पहिलो दिन आइतबार भने ५.६६ अंकले घटेको थियो ।
सुनको मूल्य तीन दिनमै प्रतितोला २ हजार ६ सय रुपियाँ बढ्यो
माउन्टेन इनर्जीको आईपीओ बुधबार बाँडफाँट हुने, को को होलान १ लाख ८३ हजार २६ जना भाग्यमानी ?
धितोपत्र बजारको दिगो विकास महत्वपूर्ण हो- डा. भट्ट